Indawo yokulala emaphandleni-Ubunewunewu kwiKhaya eli-1 lokulala
Ifama sinombuki zindwendwe onguEmma
Xa iyi-92 Mbps, iqela lakho lonke lingafowuna ngevidiyo lize libukele iividiyo kwi-intanethi.
I-Great Headley kwiFama yase-Hill ibekwe kwindawo entle yase-Oxfordshire, engekude ne-Bicester. Isanda kwakhiwe kwaye yagqitywa ukuya kweyona migangatho iphezulu, le ndawo yangoku kunye neyangoku inayo yonke into onokuthi uyifune!
Ijikelezwe ziindawo zokuhamba ezigqwesileyo kunye neendawo zokutyela ezikumgangatho ophezulu. Ukwindawo egqibeleleyo yokonwabela indawo enoluhlu olukhulu lwezinto onokuthi uzenze kufutshane.
* Umamkeli weNdlu yam ulawula le ndawo yekaJulie Burchell *
Eli khaya libekwe kakuhle ligumbi lokulala eli-1 liqukethe:
-Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo elineoveni, isitovu, ifriji/isikhenkcezisi, itoaster, iketile, imicrowave, umatshini wokuhlamba izitya, iwasha/idryer, izinto zokucheba, izitya, iimbiza/iipani, izixhobo, ulwelo lokuvasa, ioyile yokupheka, ityuwa, ipepile njl.
-Igumbi lokulala elinesitayile kunye nesitayile esinebhedi ekhululekileyo yobukhulu bokumkani, eyakhelwe kwiwodrophu, i-smart TV, indawo yokuhlala, iilinen zomgangatho wehotele kunye nesomisi seenwele.
-Igumbi lokuhlambela eliqaqambileyo nelanamhlanje elinendawo yokuziva, ishawari enkulu, izinto zangoku kunye nezinto ezifakwayo, iitawuli ezithambileyo ezifukufuku kunye nezinto zangasese zodidi oluphezulu.
-Igadi yabucala enelanga enezihlalo zangaphandle, ilungele ukonwabela ikofu yakho yasekuseni / iti kunye nesidlo sakusasa.
-Ikhwalithi elungileyo yeWiFi engenamkhawulo (malunga ne-90 Mbps yokukhuphela isantya)
-Indawo yokupaka yasimahla ukuya kuthi ga kwiimoto ezi-2 ngaphandle ngaphambili. Indawo yokutshaja imoto yombane ekhoyo ngentlawulo eyongezelelweyo (nceda ubuze).
Ibhedi yokuhamba okanye isitulo esiphakamileyo sinokubonelelwa ngesicelo. Nceda usazise xa ubhukisha.
Enye inja eziphethe kakuhle ngaphezulu kweenyanga ezili-18 ubudala yamkelekile ngentlawulo eyongezelelweyo ye-£50. Kufuneka bahlale ezantsi ekhitshini ngamaxesha onke, kwaye ukuba bashiywe bengahoywanga kwipropati, kufuneka babe kwikreyithi.
Nceda uqaphele ukuba iFama yaseHill yifama esebenzayo enezilwanyana kunye noomatshini kwisiza. Iinkomo zihlala kufutshane ne-Great Headley ke nceda uqiniseke ukuba abantwana kunye nezinja babekwe esweni ngalo lonke ixesha.
IPiddington yindawo entle nenoxolo yasemaphandleni e-Oxfordshire, kufutshane neBicester, enendawo entle yasemaphandleni kunye nokuhamba ngeenyawo, kodwa ikwakwimeko efanelekileyo yokuhlola ukuba ibonelela ngantoni na le ndawo, njengale:
-Ukwindawo efanelekileyo yokundwendwela ezinye zezona ndawo zokutyela zibalaseleyo, kunye neLe Manoir aux Quat'Saisons, iNut Tree Inn, iPointer, iMole kunye nenkukhu, ikhulu leAshendon, iDada lodaka kunye nezinye ezininzi. kufutshane. A foodies izulu!
-Ukuba ujonge indawo yonyango lokuthengisa, iBicester Retail Village edumileyo yimizuzu eli-10 yokuqhuba kude nazo zonke iimpawu zomyili ngamaxabiso athotyiweyo ukuze wonwabe!
-Ndwendwela iOxford kwaye ujonge iMarike e-Covered, i-Westgate Centre, i-Oxford Colleges, i-Ashmolean okanye i-Natural History Museums, njl.
IWoodstock, kunye neBlenheim Palace (indawo yokuzalwa eWinston Churchill), kukumganyana nje omfutshane kwaye yindawo yemisitho emininzi eyaziwayo kwihlabathi.
-Waddesdon Manor yimizuzu engama-20 yokuqhuba
-Ilali ekufutshane yaseBrill ikumgama oziikhilomitha ezi-2.5 kwaye inemibono emangalisayo, i-windmill eyaziwayo, ezinye ii-pubs ezigqwesileyo kunye nezinto eziluncedo zalapha ekhaya.
- Idolophu yemarike yeThame ikude ngeekhilomitha ezili-9. Umtsalane kwaye uneempawu ezininzi zomgangatho ophezulu we-pubs, iindawo zokutyela kunye neendawo zokutyela - yindawo entle yokutyelela. Idume ngokuba yenye yezona ndawo zisetyenziswa rhoqo ukufota kuthotho lwe-ITV oludumileyo, iMidsomer Murders, kwaye likhaya 'kwiHolo yeDolophu yaseCauston'.
-Bletchley Park kunye neSilverstone Race Track zingaphakathi kwimizuzu engama-40 yokuqhuba.
I-wifi ekhawulezayo – i-92 Mbps
IPiddington yilali ebukekayo nenoxolo yasemaphandleni enendawo entle yasemaphandleni kunye neendlela zokuhamba ngeenyawo, kodwa ikwakwimeko efanelekileyo yokuhlola ukuba ibonelele ngantoni indawo yendawo, efana nale:
- Ipaki yaseBletchley kunye neSilverstone Race Track zingaphakathi kwimizuzu engama-40 yokuqhuba.
I-Great Headley kunye nendawo yegadi ebiyelweyo ngasekhohlo kwepropathi yenzelwe ukusetyenziswa kwakho ngasese kuphela. Indawo yokupaka i-Great Headley iphambi kocango lwegaraji engwevu (ukuya kuthi ga kwiimoto ezi-2).
Indlu enkulu kunye negadi yayo ikufuphi. UJulie, umniniyo, uya kuba khona ukuba ufuna nantoni na. Kungenjalo, nceda uqhagamshelane nam ukuba ufuna naluphi na uncedo.
I-Great Headley kunye nendawo yegadi ebiyelweyo ngasekhohlo kwepropathi yenzelwe ukusetyenziswa kwakho ngasese kuphela. Indawo yokupaka i-Great Headley iphambi kocango lwegaraji en…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Piddington